Digir cad oo caleen iyo caleen leh | Bezzia
Maanta waxaan ku diyaarinay Bezzia mid ka mid ah kuwaas cuntooyin dhamaystiran oo raaxo leh Waxaan aad u jecelnahay inaan ku aragno miiska xilliga jiilaalka: digir cad oo leh cod iyo leek. Saxan fudud oo loo adeegsan karo hal saxan oo la socda, tusaale ahaan, orange-ga macmacaanka.
Si aad u samayso saxan this waxaad isticmaali kartaa labadaba digirta qallalan sida digir qasacadaysan oo la dubay. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad doorato kan dambe, si kastaba ha ahaatee, waa inaad sidoo kale karisaa qaar ka mid ah khudaarta si aad maraq u sameyso ama la'aanteed haddii aad rabto inaad badbaadiso dhowr daqiiqo. Laakiin dabcan, ma noqon doonto cunto isku mid ah.
Dhanka koodhka, waxaanu isticmaalnay mid macmala ah, sababtoo ah wuu nagu raaxaystay. Laakiin sidoo kale waad isticmaali kartaa Cod milix leh oo macaan ku dhex galin biyo badan 48 saacadood, beddelo 8 saacadoodba mar.
240g digir cad (la qooyay 24 saacadood)
1 basbaas dawan Talyaani ah, la jarjarey
2 xabo oo waaweyn oo cod macaan ah (qiyaastii 400 g)
Daqiiq si aad uhesho koodhka
1 koob oo maraq kalluun ah
Ku rid digirta cad, karootada iyo caleenta dubista cadaadiska oo ku dabool biyo. Karkari ka dib markaad cabsi geliso digirta, u kari wakhtiga lagu taliyey. Marka la sameeyo, ka saar kuleylka oo sug cadaadiska si aad u furto dheriga.
Markaa ku rid weelka blender jar karootada iyo caleenta oo ay la socdaan digsi maraq ah oo karinta ah. Boos qabsan
Dhanka kale, digsi hooseeya ku kari basasha iyo basbaaska 10 daqiiqo.
Kadib ku dar caleen iyo shiil ilaa ay ka jilicsan tahay.
Marka la sameeyo, jarjar, milix iyo basbaas daqiiqda roodhida oo ku dar digsiga si ay u brown.
Kadib ku dar digirta, maraqkii kalluunka iyo kii la shiiday ee aad kaydsatay.
Karkari oo kari ilaa shan daqiiqo si ay dhammaan dhadhanka u dhalaalaan.
Ku darso digirta cad cod iyo caleen kulul
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Recipes » Legumbres » Digir cad oo leh cod iyo caleen
Sidee ku ogaan kartaa in lammaanahaagu uu ku jecel yahay?